Xasan Cali Khayre oo daah furay imtixaanka dugsiyada sare – Kalfadhi
Xasan Cali Khayre oo daah furay imtixaanka dugsiyada sare
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta si rasmi ah u daah furay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo ay sanadkan u farriisanayan 27,600 oo arday Soomaaliyeed ah.
Mudane Khayre ayaa ka qeyb galay munaasabada daah furka imtixaanka shahaadiga oo lagu qabtay iskuulka 15-ka May ee magaalada Muqdisho.
‘’ Waxaan u mahadcelinaya Hooyooyinkii iyo Aabayashii ku soo deddaalay in ay maanta carruurtooda halkan soo gaarsiiyaan, ‘’ Annaguna waxaan ballan qaadeynaa in aan ku deddaaleyno sidii ay ardaydan ku heli lahayen mustaqbal wanaagsan,’’ ayuu yiri ra’iisul wasaare Khayre.
Ardayda reer Beledweyne ee sanadkan u farriisanayay imtixaannaadka dugsiga sare oo tiro ahaan gaarayay 1,400 ayaan u farriisan imtixaankii maanta sababo la xiriira fatahaadaha uu gobolka ka sameeyay webiga Shabeellle.
Waa sanadkii shanaad ee ay xukuumadda Soomaaliya qaadeyso imtixaanka mideysan ee dugsiyada tan iyo sanadkii 2015-kii.
Aqalka sare oo ku baaqay joojinta xiisada ka taagan Tukaraq